Beerashada | February 2020
Ugu Weyn Ee Beerashada
Noocyada tiknoolajiyada korriinada sii kordhaya ee guriga
Qeybaha kala duwan ee shimbiraha (ama isgoysyada) waxay midoobaan dhowr nooc oo ah jihada hilibka, kuwaas oo u qalma beeraha gaarka ah iyo beeraha waaweyn. Faa'iidooyinka taranka dhalidda waxaa lagu sharxay miisaankooda: 2 bilood markii qofku gaaro miisaan culus. Koritaanka iyo ilaalinta isgoysyada ayaa leh kala duwanaansho ka yimaada taranka caadiga ah ee digaaga caadiga ah.
Sidee loo bilaabaa hilibka lo'da ee hilibka ganacsiga? Qaababka iyo qaabka kiiska
Nafaqada lo'da (gurmadka) guriga oo loogu talagalay dadka bilowga ah waa ganacsi faa'iido leh, maadaama ay suurtagal tahay in la soo saaro alaabta qoyska, iyo haraadiga si ay u iibiyaan una faa'iidaystaan. Bilawga beeralayda ayaa si qalad ah u fikiraya in hilibka digaaga ee hilibka ay yihiin ganacsi waa nidaam dhib badan oo qaali ah. Hase yeeshe, ururada habboon iyo u hoggaansamida shuruudaha daryeelka, ganacsigu wuxuu kufiicnaan doonaa, keenaya dakhli.
Mid ka mid ah caanaha ugu caansan iyo caanaha ah ee lo'da ee adduunka waa caanaha Holstein.
Golshtinsky (Holstein-Friesian) Caanaha lo'da ee lo'da - mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo caan ah ee adduunka. Waxay heshay qaybta ugu weyn ee Maraykanka, Kanada, qaar ka mid ah dalalka Yurub, laakiin hadda waxaa si firfircoon loogu koray qaybaha kale ee aduunka. Sheekada muuqaalka muuqaalka Holstein Hortiisa cajiibka ah wuxuu leeyahay taariikh xiiso leh.
Geedka ugu caansan ee lo'da ee dhulka Ruush waa "Black Motley"
Wakhti dheer, lo'da Ruushka waxaa loo yaqaan kalkaalisada qoyan, iyo hantida qooyska reer guuraaga ah ayaa lagu go'aamiyay tirade xayawaankan cajiibka ah. Inta badan ayaa isbeddelay tan iyo markaas, laakiin taranka lo'da ayaa weli ah warshadaha ugu horreeya ee xoolaha. Waxaa si gaar ah lagama maarmaan u ah in la xusuusto caleemaha madow iyo cad, waxay heshay ballaarin ballaaran oo ku taal dhulalka dalkeenna, Ukraine iyo Moldova.
Qaabka dhabta ah ee riyadu 'riyo' - waa lo'da Jersey
Jersey jilicsan oo lo'da, oo si wanaagsan loo yaqaan caalamka, waa qaabka riyadu ah ee riyadu ah ee raaxo raaxo leh oo faa'iido leh. Awooddeeda waa sida in xataa xitaa jawiga adag ee Ruushku uu caddayn karo inuu yahay mid ka mid ah noocyada caanaha lo'da ee ugu fiican ee adduunka. Taariikh Kooban Tan dhalashadani waxay u muuqatay jasiiradda Ingriiska ee Jersey ee Ingiriisida Channel, oo magaceeda u bixisay.
Doorasho wanaagsan oo loogu talagalay qaas ah ama beerta - lo'da "Simmental" jilicsan
Muuqaal kale oo ka mid ah Ruushka Pestrus oo ka soo jeeda qowmiyadda dadweynaha ilaa qof shisheeye ah oo ka yimid beeraley Austrian ama Beljamiyaanka ah ayaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in awoowayaasha caan ah ee caan ka ah Ruushka iyo Yurubta ay ka dillaaceen dhulluxyo udambeeya Swiss Alps. Taariikhda asalka dhalashada Magaca calaamadda "Breed Simmental" wuxuu ka kooban yahay lo'da oo leh xiriiro noocyo kala duwan leh oo leh geeska geeska ah ee Bernese Oberland.
Kalluumeysiga lo'da ee laga qodo gobollada waqooyi - "Ayshirskaya"
Aishirskoy waxay ku tarmartay lo'da ee loogu talagalay taranta waqooyiga fog. Xayawaankani uma dulqaadan karaan kuleylka waxayna sameyn karaan iyada oo aan haysan quudin adag. Waxaa loo tixgeliyaa galmo ahaan qaan gaar ah sanadka labaad ee nolosha. Taariikhda Dhalida Marka ugu horeysa ee noocyadaas lo'da waxay ka soo jeedaan Scotland. Sidaa darteed, magaceedu wuxuu ka yimaadaa hoolka Scottish Air.
Hardy iyo aan la qabin ee lo'da ee ka soo baxa England - "Hereford"
Hilibka guri-guri waxaa had iyo jeer lagu qiimeeyaa wax ka badan badeecadda la iibsaday, badanaaba sababtoo ah tayada sare iyo faa'iidooyinka macnaha leh ee caafimaadka aadanaha. Beeralayda ganacsigooda ku abuura wax soo saarka hilibka lo'da, waxay doorbidaan inay doortaan kuwa ay u doortaan naasaha lo'da, kuwaas oo leh heer aad u sarreeya oo wax ku ool ah oo leh isbeddel diimeed oo kala duwan iyo wax soo saar wanaagsan.
Go'aanka ugu fiican ee beerta - Wareegga casaanka ah ee lo'da
Haddii takhasuska beeraha uu yahay wax soo saarka caanaha, xulashada dayactirka iyo beerashada ee lo'da Tallaalka Red Steppe waa xal macquul ah oo wax ku ool ah. Muddo dheer, qiyaastii 200 oo sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan taranta iyo shaqo-abuurka leh laamaha ayaa xaqiijinaya tani. Taariikhda Casriga Red Steppe Meesha dhalashada ee taranka waa gobolka koonfurta ee Ukraine.
Kholmogorks ("Kholmogorskaya") ayaa ku dhuftay lo'da) waxay farxad u tahay kuwa iyaga kobcaya iyo kuwa si fudud u jecel caanaha!
Ereyga "lo'da", qaar badan oo naga mid ah ayaa qiyaasi kara madow iyo caddaan muuqaal leh oo leh jajab ballaaran. Tani waa sida buuraha buuraha - wakiilada caleemaha, mid ka mid ah saddexda ugu caansan Russia, waxay u eg tahay. Lo'da Kholmogory waxaa si fiican loogu habeeyey cimilada qaboobaha, caanahana waxay leeyihiin waxyaabo dufan badan iyo dhadhan fiican.
Burenki "Yaroslavl" waa nooc - mid ka mid ah wakiilada ugu fiican ee jihada caanaha
Cawska yar ee yaroslavl waxaa lagu kala soocaa midab madow. Caanahooda waxay leeyihiin waxyaabo dufan badan, kalooriye sarreeya. In wax soo saarka warshadaha, waxyaabaha caanaha tayo sare leh ayaa laga sameeyey caanaha lo'da ee caleemaha Yaroslavl: jiiska, kareemka, farmaajada ... Taariikhda Cawska Yaroslavl ee lo'da ayaa la baddalay qarnigii XIX.
Roodhiga aadka u sarreeya ee jilicsan ee ka soo jeeda Switzerland - Zaanenskaya
Riyaha Zaanensky by xaq u qaadataa meesha ugu horeysa ee caanaha caan ku ah waxtarka sare iyo wax soo saar wanaagsan. Makhaayadda noocan ah waa meel yar oo la yiraahdo Zaanen, oo ku taalla Bernese Alps ee Switzerland. Tani waa la soo bandhigay Bandhiga Caalamiga ah ee Paris sannadkii 1856. Qiyaastii 1905, riyaha zaanensky ayaa loo keenay Ruushka.
Imisa sano ayaa bakaylaha laaluushku ku nool yihiin?
Waqtiga iyo muddada nolosha ee bakaylaha in badan oo kuxiran waxay ku xiran tahay xaaladaha xayawaanka iyo nooca cuntada. Laakiin ma aha oo kaliya arrimahan ayaa ah kuwo go'aamiya. Cunug kasta wuxuu leeyahay tiro gaar ah ee jiritaanka. Saamaynta taranka ee ku noolaanshaha ee bakaylaha In dabeecadda, bakaylaha ku nool yihiin ka yar ka mid ah dhiggooda xafladaha.
Sameynta baqashada digaaga
Quouts waa qiimaha nafaqada ee gaarka ah, taasina waxay khuseysaa hilibka shimbiraha yar yar iyo ugxantooda qallalan. Waxay soo baxday in iyaga sii koraya guriga ay fududahay, laakiin marka hore waxaan u baahannahay qafis, taas oo aan isku dayi doono in aan sharaxno. Baqashooyinka digaagga waxaa laga dhigi karaa netted, ka samaysan tufaaxa iyo xitaa balaastiig, sidaas darteed doorashada guryaha ee boodhka waa in si taxadar leh loo qaato, ugu horreyn ku saleysan dabeecadaha noolaha raaxada ah ee shimbiraha yar yar.
Mawduuca, quudinta iyo quudinta digaaga guriga
Waa maxay sababta sanadguurada quudinta sanad walba ay noqoto mid aad u caan ah? Sababtoo ah kharashka yar ee ukumaha digaaga duufaanka iyo sharafta degdegga ah ee shakhsiyaadka qaangaarka ah, tanina waa mid ka mid ah meelaha ugu faa'iido badan ee beeraha digaaga ama hiwaayadda. Waxaan ka hadli doonaa sidii loo iibsan lahaa, u kori lahaa oo si habboon u ilaalin lahaa wakiillada walaalaha ah bikrada ah ee maqaalkeenna.
Noocyada iyo taranka digaagga broiler ee guriga iyo guriga
Digaagga hilibka dhuxusha - broilers - waxay ka duwan yihiin shimbiraha da'yarta ah ee caadiga ah leh tamarta kobcinta korodhka iyo qiimaha hooseeya ee quudinta 1 kg ee helitaanka. Kicinta digaagga broiler ee beerta waa wax faa'iido leh. Waxaa lagu gowracay hilibka kadib markii lagu hayo 2.5 bilood. Iyada oo daryeel ku haboon, culeyska digaaga waqtigaan waa 1.4-1.6 kg.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beerashada 2020